Alaabada Apple | Xogta IPhone (Bogga 14)
Ma ka fikireysaa inaad iibsato Apple Watch? Bal u fiirso hagaha xajmiga rasmiga ah
Apple waxay na siisaa hage tusaalooyin iyo cabirro ah si aan u dooran karno isku-dhafkeenna habboon.
Muhiimad Macaan: Apple Watch maahan wax soo saar badan
Ra'yi ku saabsan Apple Watch, qiimaheeda iyo noocyadeeda kala duwan oo ku kici kara ilaa $ 17.000 Ma mudan tahay in la iibsado Apple Watch?
Qiimaha band ee dhammaan noocyada Apple Watch
Waxaan soo bandhigeynaa qiimaha silsiladaha kala duwan ee loogu talagalay Apple Watch
Qiimaha Apple Watch: dhammaan noocyada
Qiimaha bilowga ee Apple Watch, oo naloogu sheegay qormadeena maanta wuxuu noqon doonaa $ 349, laakiin taasi waxay noqon doontaa qiimaha nooca aasaasiga ah oo keliya.
Apple Pay on Apple Watch Lacag bixinta ma sahlanaan kareyn!
Nidaamka lacag-bixinta ee Apple Pay ee Apple Watch-ka ma fududaan karin. Waxa kaliya ee ay tahay inaad sameyso ayaa ah inaad saacadda u dhawaato terminal lacag bixin oo ku habboon.
Apple Watch: wax kasta oo aan ka ogaanno smartwatch ilaa taariikhda
In kasta oo Apple ay si rasmi ah noo tustay iyaga sanadkii la soo dhaafay, haddana wixii markaa ka dambeeyay waxaa jiray xan iyo xogo badan oo ku saabsan Apple Watch. Maanta waan soo koobeynaa.
Ma waxaad dooneysaa Apple Watch oo leh waraaqo sawir leh? Waa kuwan qaar
Waxaan kuu soo qaadaneynaa xulasho sawir-gacmeedyo lagu dhiirrigeliyay is-dhexgalka Apple Watch.
Waxaan shakhsi ka dhigi karnaa Apple Watch-keena annaga oo duubna magaceena
Xanta ugu dambeysa ee ku saabsan Apple Watch waxay soo jeedineysaa inaan shaqsiyadeyn karno anagoo ku xardhan magacyaga
Qof baa hore u tijaabiyay Apple Watch oo si faahfaahsan ayuu noogu sheegayaa
Kuwa awooday inay tijaabiyaan Apple Watch waxay si faahfaahsan noogu sheegayaan shaqooyin ilaa iyo hadda aanan ogayn
Farqiga u dhexeeya shaashadda Apple Watch iyo Watch Sport
Haddii aad shaki ka qabto qalabka aad dooranaysid, waxaan ku tusi doonaa farqiga u dhexeeya shaashadda labada nooc
Astaamaha farsamo ee Apple Watch
Waxaan soo bandhigeynaa astaamaha farsamo ee ugu caansan Apple Watch, oo si rasmi ah loo soo bandhigi doono Isniinta soo socota, Maarso 9
Apple wuxuu hogaamiyaa meeleynta alaabada filim iyo tv
Brand Channel wuxuu xaqiijinayaa in Apple ay hogaamineyso Meeleynta Alaabada ee filimka iyo telefishanka, joogitaan aan ku aragnay xafiiska sanduuqa 50 Hooska Grey.
Waxa aan weli ka ogaano Apple Watch
Miyaad u malaynaysaa inaad wax walba ka ogtahay Apple Watch? Weli waxaa jira furayaal badan oo smartwatch ah oo aynaan ogayn
Apple waxay nagula yaabi kartaa sameecadaha dhagaha ee Bluetooth ee Apple Watch
Apple waxay lahaan kartaa headset-ka Bluetooth oo diyaar u ah inuu raaco Apple Watch
Dhagax dixeed: tartanka ay doonayaan inuu u noqdo Apple Watch weligiisna ma noqon doono
Kuwani waa sababaha labadan shirkadood loogu talagalay inaanay waligood suuqa isugu iman.
Magic Touch, ciyaar aan hal far kaliya ku xakameyno
Magic Touch waa mid ka mid ah ciyaaraha ugu dhaqsaha badan ee ka soo kordha App Store, taas oo faa'iidadeedu tahay in lagu xakamayn karo hal gacan oo keliya
Tabaha loogu talagalay macruufka 8 (I): bilaash booska iCloud
Talooyin si wanaagsan loo maareeyo booska iCloud oo loo banneeyo booska
Lunatik wuxuu u diyaariyey dacwad aan biyuhu lahayn Apple Watch
Lunatik wuxuu u diyaarinayaa dacwad Apple Watch taas oo ka dhigi doonta mid aan biyuhu geli karin
Guji, adabtarad kuu oggolaan doonta inaad ku isticmaasho xargaha kale Apple Watch
Guji waa adabtarad loogu talagalay Apple Watch oo aan ugu isticmaali karno suunka 24-milimitir wixii saacadda Apple ah.
Kuwani miyay noqon doonaan qiimaha Apple Watch?
Isku-darka dhammaan qiimaha ay Apple Watch lahaan karto waxay kuxirantahay nooca iyo suunka la xushay.
Dhirta iyo Zombies 2 waxay soo dhaweyneysaa 'Godadka Qaboojiyay II'
Qaboojiyay Caves II waa qeybta cusub ee lagu soo saaray nooca cusub ee dhirta iyo Zombies 2 halkaas oo aan ku ogaan doonno zombies-ka iyo heerarka cusub
Kani waa Xilliga Dhagaxleyda: shaashadda midabka iyo ismaamulka hal toddobaad
Astaamaha iyo qiimaha Waqtiga Dhagax dixeed, smartwatch cusub oo leh shaashad midab e-warqadeed leh oo la tartami doonta Apple Watch.
Tani waxay noqon laheyd seefta laysarka loo maleynayo in Apple ay rabto Star Wars
Munaasabadda sii deynta soo socota ee filimka cusub ee Star Wars, qaar ka mid ah qeexitaanno loo malaynayo (mala-awaal) laydhadh Apple ah, iSaber, ayaa daatay.
iTunes horeyba wuxuu u lahaa qayb ka mid ah filimada Disney oo leh qiime gaar ah
iTunes horeyba waxay u laheyd qeyb filinka Disney ka mid ah oo albaabadeeda u furtay qiimo gaar ah waqti xaddidan.
Sidee WhatsApp noqon doonaa Apple Watch? Waxaa jira fikrad
Wax aad u yar ayaa u haray daahfurka saacadda shirkadda tufaaxa walina ma ogin waxa ay yihiin codsiyada aan ka dhex arki doonno.
iTunes 12.1.1 ee Windows hadda la heli karo, kuwani waa warkeeda
U soo dejiso iTunes 12.1.1 ee Windows oo xalli cayayaanka kala duwan ee ku sugnaa noocyadii hore ee saameeyay Muuqaalka
VLC ee macruufka waxay ku noqotaa App Store
VLC waxay dib ugu laabanaysaa App Store ka dib markii la waayey iyada oo aan raad la helin guul la'aan awgeed, waxaan rajeynayaa ciyaaryahanka ugu caansan in si fiican loo soo dhaweyn doono markan.
Qaybta ciyaaraha cusub oo aan ku iibsan app-ka App Store
Dukaanka App wuxuu bilaabay kor u qaadida cayaaraha iyada oo aan wax laga iibsanin gudaha App Store oo ku yaal bogga lagu soo bandhigay.
Dukaanka App ayaa hadda aqbalaya barnaamijyada illaa 4GB
Apple wuxuu kordhiyaa canshuurta ugu yar 2Gb ilaa 4Gb markuu app ama ciyaar u soo raro AppStore.
Apple waxay go'aansatay inay awood u siiso cabirkeeda laba-tallaabo ee aqoonsiga ah ee adeegyada caanka ah ee FaceTime iyo iMessage, sida ay horayba ugu jirtay iCloud.
Tifatiraha fiidiyowga Replay wuxuu ku darayaa astaamo iyo muusig cusub
Tifatiraha fiidiyowga ee 'Replay video' ayaa hadda helay cusbooneysiin cusub oo heeso cusub lagu soo kordhiyay iyo tayada fiidiyowga oo la hagaajiyay
Infuse 3 wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ka sii gudbiso FTP iyo Google Cast
Infuse ayaa hadda laga cusbooneysiiyay App Store-ka oo u oggolaanaya waxyaabaha lagu ciyaaro iyada oo loo marayo FTP iyo Google Cast, iyo howlaha kale ee cusub.
Kaamirada IPro: waa fikrad ku saabsan tartanka Apple ee GoPro Hero 4
Haddii Apple uu ka fikiray sharad ku saabsan qaybta kamaradaha isboortiga, iPro Camera waa fikrad soo koobaysa waxa uu noqon doono tartanka GoPro Hero 4.
Ipod-kii ugu horreeyay wuxuu la jaan qaadayaa nooca ugu dambeeyay ee iTunes 12.1
In kasta oo la sii daayay 2001, 14 sano ka dib, iPod-kii ugu horreeyay wuxuu wali taageeraa nooca la cusboonaysiiyay ee iTunes, in kasta oo xoogaa isbeddel ah lagu sameeyay.
Apple Watch ayaa ka caawin doonta dadka qaba sonkorowga inay xakameeyaan gulukoosta
Apple Watch ayaa ka caawin doonta bukaanada sonkorowga qaba inay xakameeyaan heerarka sonkorta dhiigooda taas oo ay ugu wacan tahay codsi cusub
Sida loo yareeyo iTunes 12.1 ilaa 12.0.1 Windows iyo Mac
Haddii aad dhibaatooyin ku qabtid JAILBREAK iyo nooca iTunes 12.1, maanta waxaan ku baraynaa inaad hoos ugu dhigto nooca 12.0.1 ee Windows iyo Mac
Dexcom waxay soo saareysaa dareemayaal si uu u akhriyo heerarka gulukoosta ee Apple Watch
Dexcom waxay soo saareysaa dareemayaal iyo codsi ay ku aqriso heerarka gulukoosta dhiigga ee ka socda Apple Watch, oo ah wax aad u anfacaya macaanka.
Apple Watch ayaa laga reebi doonaa imtixaanada
Adeegsiga Apple Watch si loogu khiyaamo imtixaanada ayaa laga mamnuuci doonaa kuliyadaha iyo jaamacadaha adduunka. Sideed ugu koobiyeyn kartaa Apple Watch?
Codsiga waraaqaha Muuqaalka ayaa hela qaabab cusub
Cusboonaysiinta ugu horreysa waxay u timid barnaamijka Microsoft ee Muuqaalka muuqaalka ee qalabka iOS
Codsiyada lagu maareeyo emaylka ku saabsan iPhone-ka (III)
Waxaan ku darnaa seddex codsi oo cusub liiska barnaamijka si aan u maamulno emaylkeena ku jira iPhone-ka
iTools, bedelka ugu wax ku oolka badan ee iTunes
Beddelka ugu fudud uguna dhaqsaha badan iTunes-ka suuqa, gebi ahaanba bilaash ah oo la qaadan karo, marna dib uma isticmaali doontid iTunes mar kale marka laga reebo inaad soo celiso ama cusbooneysiiso.
Waraaqda FiftyThree waxay ku siisaa dhammaan xulashooyinka caymiska bilaashka ah
FiftyThree waxay go aansatay inay ka dhigto dhamaan astaamaheeda mudnaanta leh barnaamijkeeda Paper gabi ahaanba bilaash si dhamaanteen aan ugu raaxeysanno.
Wadada Crossy, ciyaarta cusub ee aad rabto inaad soo dejiso
Hadafkaaga Crossy Road maahan inaad u ogolaato inay ku dilaan oo ay helaan dhamaan lacagta aad awoodo si aad u furto dhamaan astaamaha aad awoodid.
Tilmaamaha ugu dambeeya ee ku saabsan sida loo isticmaalo Apple Pay
Haddii aad rabto inaad waxbadan ka ogaato sida loo isticmaalo Apple Pay, meesha iyo goorta, maanta waxaan kuu keenaynaa hagaha saxda ah ee sida ugu badan looga faa’iideysan karo.
Tani waa gudaha iyo bannaanka Chongqing Apple Store, oo furmi doona berri
Dukaanka cusub ee Apple oo berri ka furanaya Shiinaha ayaa diyaar u ah maalinta weyn. Marka waa gudaha iyo dibedda.
Apple wuxuu bilaabayaa iTunes 12.1 oo leh qalab loogu talagalay Yosemite oo ah ciwaanka ugu weyn
U soo dejiso iTunes 12.1 ee OS X ama Windows oo ku raaxee astaamaha cusub ee noocaan ah sida aaladdeeda cusub ee Yosemite.
Sida loo dhoofiyo xiriirada lagu keydiyay iCloud
Baro sida loo dhoofiyo xiriirada ku keydsan iPhone-kaaga ama iPad-ka qaabka vCard ee guddiga iCloud.com.
Cusbooneysiinta cusub ee 1Password waxay noo keeneysaa astaamo cusub
Codsigii weynaa ee 1Password ayaa hadda lagu cusboonaysiiyay App Store isagoo wata warar muhiim ah
"Free on iTunes" ama qaybta ay Apple na siiso heeso ama silsilado
Qodobka aan ku naqaanno "Bilaashka iTunes" ama waxa isku mid ah, qeybta ay Apple na siiso heeso ama silsilado.
Ma dukaanka App ayaa luminaya tayada?
Waxaan falanqeyneynaa App Store iyo xaaladdiisa tayada iyo adeegyada ee hadda.
Tani waxay ahayd furitaankii weynaa ee Westlake Apple Store
Kani wuxuu ahaa horyaalkii weynaa ee Apple Store cusub ee cajiibka ah ee ku yaal Shiinaha.
15 sababood oo looga tago WhatsApp-ka Telegram
Waxaan ku tusineynaa 15 sababood oo arjiga fariinta ee Telegram uu uga fiican yahay WhatsApp
7 waxyaabood oo ay tahay inaad ka ogaato wixii ku saabsan iCloud Photo Library
Xaqiiqdii akhristayaal badan ayaa hore u ogaa shaqada iCloud Photo Library ee iOS 8, laakiin kuwa aan aqoon, waxay awoodi doonaan inay wax walba ka ogaadaan qodobkan.
Dib-u-habeynta iyo cusbooneysiinta barnaamijka Apple TV madal ayaa sii socota. Ku imaanshaha wadiiqooyin kala duwan usbuucii la soo dhaafay, tan cusub
Hel iMazing gebi ahaanba bilaash muddo gaaban
iMazing, oo ah codsi beddel fiican u ah iTunes, ayaa laga heli karaa gebi ahaanba bilaash iyada oo la raaco talaabooyinkan.
Waqti kasto miyuu ku qaatay Apple?
Codad badan ayaa sheegaya in Apple ay lumisay dhimbiilo lagu yaqaanay waagii hore. Ma run baa in ka hor, wax walba ay si fiican u shaqeeyeen?
Khariidadaha Google ee loogu talagalay IOS waxay helayaan astaamo cusub
Khariidadaha Google ayaa hadda la helay casriyeyn weyn oo ku biirinaysa war aad u faa'iido badan.
Google Translate ee macruufka waxaa lagu cusbooneysiiyay warar muhiim ah
Google waxay hada soo bandhigtay cusbooneysiinta cusub ee dalabkeeda turjubaanka oo ay kujiraan astaamo cusub oo muhiim ah
AllCast waxay noo ogolaaneysaa inaan tusno waxa ku jira giraangiraheenna oo aan lahayn Apple TV
Codsiga AllCast wuxuu noo ogolaanayaa inaan ku soo saarno nuxurka adeegyada duubista iyo kaydinta daruuraha ee TV-ga Smart TV
Tani waxay noqon doontaa dalab lagu maareeyo Apple Watch, lagu ogaado qarsoodi badan oo saacadda Apple ah
Dhammaan wixii qarsoon ee Apple Watch waa la muujiyey iyada oo loo mahadcelinayo codsigii maamuli lahaa Apple Watch. Soo hel dhammaan xulashooyinka Apple Watch.
Faa’iidooyinka Ay Leedahay Qeybta Saddexaad Dekedda Hillaaca
Furitaanka adeegsiga dekedda hillaaca Apple ee dhinacyada saddexaad waxay siisaa faa iidooyin badan, kuwa isticmaala iyo kuwa soo-saaraba
Runtii ma waxaan dooneynaa MacBook Air oo leh muuqaalka Retina?
Waxaan eegeynaa faa iidooyinka iyo qasaaraha ka mid noqoshada muuqaalka 'Retina' ee muuqaalka hawada ee 'MacBook Air' sanadkaan.
Sida loo soo dejiyo barnaamijka Waterlogue-ka bilaash
Codsiga ay Apple u xushay inuu ku bixiyo gudaha barnaamijka Apple Store waa Waterlogue.
Isku day Apple Watch khadka tooska ah ee kombiyuutarka
Bandhigga tooska ah ee Apple Watch si loo arko waxa Apple Watch iyo barnaamijyadiisu u egyihiin ka hor intaan la bilaabin Maarso 2015.
Haddii aad rabto Apple Watch been abuur ah, tani waxay kugu kacaysaa kaliya $ 35
Waxay ku iibiyaan Apple Watch been abuur ah $ 35 oo nuqul ka sameysa naqshadda Apple Watch si faahfaahsan.
Codsiyada ugufiican ee lagu hubiyo bartayada 'Instagram' iPad-ka
Kuwani waa saddexda codsi ee, sida ay ila tahay, ay ugu fiican yihiin la-tashiga quudintayada shabakadda bulshada sawir qaadista: Instagram
Ka taxaddar haddii lambarkaaga sirta ah ee iCloud uu ku jiro liistadan
iDict waxay maamushaa inay dhaafto qufulka Apple waxayna jabsan kartaa koontada iCloud ee isticmaalayaasha qaarkood ee isticmaala furayaasha daciifka ah
Qalab cusub oo lagu jabsado lambarka sirta ah ee 'iCloud' ayaa u muuqda
Dhawaan khatar cusub oo amniga iCloud ah ayaa la soo baxday qalab cusub oo weerar xoog ah.
Infuse waa la cusbooneysiiyaa iyadoo lagu darayo adeegga Trakt
Infuse ayaa lagu cusbooneysiiyay App Store-ka oo noo ogolaanaya inaan laxirirno koontadeena Trakt si aan ula socono filimadayada iyo taxanaheena
Pocket Drive-ka ayaa kuu beddelaya iPhone-kaaga iyo iPad-ka adoo adeegsanaya dirawal adag oo dibadda ah
Pocket Drive wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ku wareejiso ama aad ka soo wareejiso iPhone-kaaga iyo iPad-kaaga adigoon u baahnayn fiilooyin.
Qaar ka mid ah isticmaaleyaasha ayaa dhib kala kulma kaydinta kaararka Apple Pay
Qaar ka mid ah isticmaaleyaashu ma awoodaan inay ku daraan kaarkooda deynta iPhone 6 ka dib soo celinta, ka hortagga isticmaalka caadiga ah ee Apple Pay.
Hadda waxaad haysataa 14 maalmood oo aad kaga soo celiso ciyaaraha iyo codsiyada App Store
Helitaanka lacag celin ah oo ku saabsan iibsashada App Store waa suurtagal haddii aad sameyso kahor 14 maalmood kadib bixinta arjiga ama ciyaarta
Apple hadda waxay kuu oggolaaneysaa inaad ka soo celiso wixii aad ka iibsatay App Store muddo 14 maalmood ah
Apple wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ku soo celiso iTunes iyo App Store iibsiga 14 maalmood gudahood markii la iibsado iyada oo aan sharaxaad laga bixin.
TVSofa waxaa lagu xirayaa sharciga cusub ee Aqoonta Maskaxda
Sharciga cusub ee Hantida Caqliyeed wuxuu sababay in la xiro arjiga caanka ah ee TVSofa, in kasta oo codsiyo cusub lagu dhawaaqay intii lagu jiray 2015
Barnaamijyada ugu fiican ee 2014 ee loogu talagalay macruufka
Xulashada codsiyada ugu fiican ee macruufka ee 2014.
100 barnaamij oo loogu talagalay iPhone iyo iPad oo ku habboon Chromecast
Codsiyada ugu fiican ee iPhone iyo iPad ee la jaan qaada Chromecast, beddelka Apple TV iyo AirPlay.
Facebook Messenger wuxuu kuu ogolaanayaa inaad aragto qofka aqriyay fariimahaaga
Facebook Messenger ayaa ku dartay shaqadan si loo hubiyo in dadka isticmaala ay akhriyaan fariimahayaga iyo in kale
'' Aiwatch '' waa isku xirka Shiinaha ee Apple Watch, batterigiisuna wuxuu gaaraa 168 saacadood
Shirkad laga leeyahay dalka Shiinaha ayaa horey u sameysay nooc u gaar ah Apple Watch. Waan ku tusaynaa
Xayeysiinta Kirismaska ​​ee Apple ma niyad jabin: 'Heesta'
Xayeysiiska cusub ee Apple ee kirismaska ​​ayaa adeegsanaya hees loo keydiyey laba fac si loogu daboolo iyadoo la adeegsanayo Mac
Tufaax cusub: Xayeysiiska Heesta ee Kirismaska
Xayeysiinta Apple ayaa had iyo jeer runtii aad u muuqda, kiiskanna, xayeysiiska 'Song' ma noqon doono mid ka reeban heerka caadiga ah ee qiyaasta shucuurta.
Waan kuu xiisay, iPod Classic
Seddex bilood ka dib markii ay ka baxday suuqa, iPod Classic ayaa kor u kacay qiimaha. Sababtoo ah iPods ayaa dejiyay isbeddelka.
Hadda waxaad ku bixin kartaa PayPal qayb ka mid ah Dukaanka Apple ee khadka tooska ah
Dukaammada Apple-ka ee Online-ka ah ayaa horeyba u aqbalay PayPal oo ah habka lacag bixinta si ay ugu iibsadaan alaabada iyo agabyada Apple ee loogu talagalay iPhone, iPad iyo kuwa kale.
12-ka Maalmood ee Apple ee wax siinta ma soo laaban doonaan Kirismaska?
Maqnaanshaha Jimcaha Madow ee dhulka Yurub, ma ogin haddii Apple qorsheynayo inuu soo bandhigo codsigiisa "12 maalmood oo hadiyado ah" Kirismaska
Dhibaatada hagaaji Kuma xirmi karto App Store
Waxaan ku tusineynaa sida loo xaliyo dhibaatada isku xirka iPad-kayga ama iPhone-ka ee leh App Store
Apple waxay ku dhiirrigelisaa farriimaha codka farriimaha xayeysiis
Farriimaha codka ayaa udub dhexaad u ahaa macluumaadka loogu talagalay ku dhawaaqista cusub ee Apple halkaas oo laba jilaa oo qosol badan ay ku muujinayaan wararka barnaamijka si majaajillo ah
Top 5: Wax soo saarka Apple oo ahaa flop dhab ah
In kasta oo ku dhowaad wax kasta oo si fiican looga yaqaanno Apple ay noqdeen guul dhab ah, haddana waxaa jira mashaariic badan oo hadhkii hadhay oo runtii fashilmay.
iCloud uma shaqeyneyso sidii la rabay, Apple-na wey iska indhatireysaa
iCloud uma shaqeyneyso sidii la rabay iyo Apple, oo ka warqabta dhibaatooyinka, uma muuqato inay si dhab ah u qaadaneyso.
Apple waxay faahfaahin ka bixisaa dalabkeeda Black Friday
Faahfaahinta Apple's Black Friday waxay kuu soo bandhigeysaa kaararka hadiyadaha ee iibsashada iPhone, iPad, Mac, iPod ama Beats headphones.
Wax kasta oo ay WatchKit nooga shaacisay Apple Watch
WatchKit waxay na siisay macluumaad badan oo ku saabsan Apple Watch, waanu kuu sheegaynaa
Sheekada cajiibka ah ee Shaqooyinka iyo noocii ugu horreeyay ee iPod
Steve Jobs wuu diiday noocii ugu horreeyay ee iPod, wuuna sameeyay maxaa yeelay sida uu sheegayo aad ayey u weyneyd. Dabcan, sheeko xariirta ka dambeysa arrinta ayaa ka yaabisay qof kasta oo ku noolaa.
Sida sawirada looga soo raro maktabaddaada 'iCloud Drive' shabakadda shabakadda
Dejinta Maktabadda Sawirka ee ICloud iyo Adeegsiga Tilmaamaha si aad Sawirro ugu soo rarto Maktabadda iCloud ee Mac adigoo isticmaalaya Browser Web
Sida loo isticmaalo AirDrop si loo wadaago faylasha
Cashar barasho si loo barto sida loo isticmaalo AirDrop si loogu wadaago feylasha inta udhaxeysa aaladaha Apple, iyadoo la adeegsanayo macruufka ama mac OS X. Waxaan u sharaxeynaa talaabo talaabo
Tayada cajiibka ah ee shaashadda anti-glare ee iPad Air 2
Shaashadda ka hortagga dhalaalka ee loo adeegsado iPad Air 2 waxay qof kasta uga dhigeysaa cabsi ay ka qabto tayadiisa. Isticmaalka safayr ee moodooyinka mustaqbalka ayaa hadda dib looga fikiray
Kuwani waa natiijooyinka warbixinta sanadlaha ah ee Apple
Natiijooyinka maaliyadeed ee Apple ee sanadka ayaa hadda la daabacay, warkuna waa faa'iido badan, iyo sidoo kale hibo sare oo maalgashi.
Naqshadeynta Apple Watch ee ku saabsan iPhone-kaaga mahadcelin ah tweak
Isdhaxgalka Apple Watch wuxuu saaran yahay bushimaha qof walba, horumariye wuxuu abuuray codsi taas lagu ekeeyay, maanta waxaan soo qaadaneynaa isbeddel ay dad badani filayeen.
Apple waxay daabacdaa warbixinteeda sanadlaha ah iyadoo leh xog xiisa badan laga soo bilaabo 2014
The Big Apple ayaa hadda ku daabacay boggeeda warbixin sanadle ah ee sanadka 2014 oo leh xog xiiso leh oo ku saabsan maamulka Apple ee sannad maaliyadeedkan
Sida loogu daro kumbuyuutarka Mac-gaaga si wicitaano looga dhex sameeyo iPhone
Haddii aad rabto inaad isticmaasho kombuyuutarkaaga Mac si aad wicitaan ugu dhex sameyso iPhone-ka, waxaad u baahan doontaa kumbuyuutar kumbuyuutar ah sida kan aan maanta ku tusno.
Sida Loogu Hawlgaliyo Waraaqda Dukaammadaada Hore ee Qalabka Waxqabadka Sii Wadida
Si loogu raaxeysto Handoff ee aaladaha duugga ah ee Mac, isbeddelada qalabka iyo rakibaadda sida Sii wadida Aaladda loo baahan yahay
Sida loo dejiyo kaarka lacag bixinta ee Apple Pay
Ku kaydso kaarka asalka ah ee kharashyadaada Apple Pay, sidan ayaad waqtiga ugu ilaalinaysaa lacag bixinta dukaamada iyo khadka tooska ah.
Moodo cusub: »swaggers» oo isugu soo baxay Apple Stores hortiisa, cibaado ama carwo?
Moodo cusub ayaa u muuqata in lagu aasaasay Apple Store oo ku taal Paseo de Gracia, Barcelona, ​​halkaas oo kooxaha magaalooyinku isugu yimaadaan si ay gelinka dambe albaabadooda u qaataan.
Furaha "Tirtir" had iyo jeer masixi maayo sawir gebi ahaanba ama isla markiiba, haddii aan ku darno nuqullada ku jira iCloud howlgalka waa mid adag. Baro inaad finalka ka dhigto
Liiska bangiyada iyo shirkadaha la jaan qaada Apple Pay
Liistada hay'adaha, bangiyada iyo kaararka deynta iyo kaarka la jaan qaada nidaamka lacag bixinta Apple Pay
Xcode waxaa lagu cusbooneysiiyay macruufka 8.1 iyo OS X Yosemite SDK
Nooca Xcode 6.1 ayaa yimid Mac App Store iyadoo SDKs cusub loogu talagalay iOS 8.1 iyo OS X Yosemite
Haddii aad haysato kaarka amaahda Mareykanka, waxaad ku isticmaali kartaa Apple Pay dhul kasta
Khiyaano ku jirta iOS 8.1 si aad u qaabeyso Apple Pay haddii aan ku noolaaneyn Mareykanka si loogu daro kaararka amaahda Mareykanka ee noo ogolaanaya inaan ku bixinno isticmaalka NFC.
Tani waa sida Sawirada ku jira iCloud ay u shaqeeyaan
Fursada cusub ee Sawirada ku jirta iCloud oo si faahfaahsan loogu shaqeysiiyey macruufka 8.1
Bandhig muuqaal ah oo ku saabsan sida lacagta loogu bixiyo Apple Pay at McDonalds
Mudaaharaad fiidiyoow ah oo ku saabsan sida loogu bixiyo iPhone 6-ka McDonalds iyadoo la adeegsanayo Apple Pay oo ah qaab lacag-bixin la'aan ah oo loo maro NFC.
Aaway dhinac-gees ee iTunes 12?
Waxaad u badan tahay inaad dareentay in iTunes 12 ay wax yar badashay. Dhexdooda, in dhinicii dhintey la waayey. Maanta waxaan kuu sheegeynaa sida dib loogu helo.
IOS 8.1 hadda waa laga heli karaa Apple Pay
Apple wuxuu sii daayaa macruufka 8.1 ee cusbooneysiinta barnaamijka Apple Pay iyo astaamaha kale ee cusub
Si loo badalo Aqoonsiga Apple ee qalabkeena, marka hore waa inaan tirtirno xisaabta iCloud ee qalabkeena. Waxaan ku tusineynaa tillaabooyinka la raacayo.
IOS 8.1 astaamaha imanaya Isniinta soo socota ee iPhone iyo iPad
Soo koobid ku saabsan hagaajinta ay keeneen cusbooneysiinta iOS 8.1 ee aan sii deyn doono Isniinta soo socota, Oktoobar 20.
iTunes 12.0.1 hadda waa la heli karaa si loo soo dejiyo
Nooca cusub ee iTunes, in kasta oo aanu Apple si rasmi ah u shaacin, haddana waxaa loo heli karaa in laga soo dejisto Mac OS X iyo Windows.
La cusbooneysiiyay arjiga Facebook ee loogu talagalay iPhone 6/6 Plus
Waa goor dambe, laakiin ugu dambeyn waxaa la dhihi karaa waa la cusboonaysiiyay arjiga Facebook ee iPhone 6/6 Plus. Cusboonaysiinta, oo lagu daabacay AppStore
Dhirta iyo Zombies 2 waxay bilaabaysaa «Xeebta hirarka weyn I»
PopCap waxay soo saartay cusbooneysiin cusub oo ay kujirto dhacdo cusub oo loogu magac daray: "Xeebta hirarka weyn I"
Sida loo hagaajiyo iTunes WiFi u dhigma macruufka 8
Ka dib markii la cusbooneysiiyay macruufka 8, dadka isticmaala qaarkood waxay soo sheegeen dhibaatooyin ku saabsan isku dheelitirka WiFi ee u dhexeeya iTunes iyo iPhone. Halkan waxaan ku soo jeedinaynaa habab lagu xalliyo.
Waqti badan ayaa laga joogaa tan iyo markii Apple aysan cusbooneysiin alaabooyinkan
Apple waxay soo bandhigi doontaa iPad Air 2 iyo iPad Mini 3 Oktoobar 16 laakiin sidoo kale waxay cusbooneysiin kartaa iPod, Mac Mini, Apple TV ama kormeerkeeda muuqaalka 'Thunderbolt Display'.
Maxuu Apple soo bandhigi doonaa Oktoobar 16?
Apple muxuu noo hayaa dhamaadka sanadka?
Gmail wuxuu xaliyaa dhibaatooyinka iPhone 6 iyo 6 Plus
Google waxay hada soosaartay nooc cusub (oo leh nambarka pi) codsigiisa si ay u eegto emaylkaaga, Gmail, khaladaadka hagaajinta
Sida loo qariyo barnaamijyada la iibsaday ee ku jira iOS 8 (App Store)
Thanks to macruufka 8 waxaan ku qarin karnaa barnaamijyada laga soo iibsaday App Store, taas oo ah, ka saar barnaamijyadaas qeybta: "La Iibsaday"
Haddii aan rabno inaan ka helno iCloud barnaamij aan taageereynin xaqiijinta laba-tallaabo ah, waa inaan soo saarnaa lambar sir ah
Saddex sano la’aan Steve Jobs
Saddex sano ayaa ka soo wareegtay dhimashadii Steve Jobs, sannado ay shirkaddu wax badan iska beddeshay
Apple bilaabay qalab si loo hubiyo qufulka iCloud
Apple waxay soosaartay qalab cusub oo ay ku hubiso qufulka iCloud ee qalab kahor intaadan iibsan
Haddii aad iibsato iPhone gacan labaad ah, hubi inuu xiran yahay
Apple waxay soo saareysaa qalab khadka tooska ah looga baaro haddii iPhone ama iPad xiran yihiin, ka hortagga shaqeysiintooda iyagoon ogeyn lambarka sirta ah ee Apple ID
Ku raaxeysiga cambaareynta Apple
Waa sheekada had iyo jeer isku soo noqnoqota, sanadba sanadka ka dambeeya: Apple ayaa soo saarta wax soo saar cusub (badanaa iPhone) wayna soo baxdaa ...
5ta kulan ee aan waligood laga waayin iPad kasta
Ciyaarahaani waa kuwa aniga ii aheyn inaan ka maqnaado iPad kasta: laga bilaabo ciyaaraha carruurta sida Goo Xadhiga 2, illaa sida dhabta ah ee loo yaqaan 'Real Racing 3'
Waqtiyada sugitaanka ee iPhone 6 Plus waxay gaarayaan 3 ama 4 toddobaad
Sugitaanka terminalku wuu kala duwanaan karaa iyadoo kuxiran qaabka iyo qaabka iibsiga, iPhone 6 Plus waxaan usoconaa 3-4 todobaad oo sugitaan ah.
GoodReader hadda waxay taageertaa iCloud Drive iyo Handoff
App-ka lagu akhrinayo PDF-yada, GoodReader, ayaa la cusbooneysiiyay si uu ula jaan qaadi karo macruufka 8 iyo dhammaan shaqooyinkiisa sida iCloud Drive iyo Handoff
Sida loo isticmaalo iCloud Drive
Haddii aadan wax ka baranin adeegyada daruuraha qaladaadkii hore sida MobileMe, waa inaad siisaa iCloud Drive isku day.
Waxaan ka heli karnaa sawiradeena iCloud biraawsarka
iCloud.com waxay tusi kartaa sawiradeena oo lagu kaydiyay daruuraha Apple
FIFA 15 hadda waa la heli karaa si bilaash ah looga soo dejiyo App Store
EA Sports waxay horey u sii deysay FIFA 15-keeda cusub ee loogu talagalay iPhone iyo iPad, kaas oo si bilaash ah looga soo dejisan karo App Store.
Ku fur booska IPhone 6 iyo 6 PLus dukaanka Apple
Apple waxay u oggolaaneysaa sii qabsashada iPhone 6 iyo iPhone 6 Plus boggeeda internetka. Horumar ku saabsan siyaasadeeda iibka iyo farxad u ah isticmaaleyaasha, waxaan ku siineynaa talooyin.
Fursadaha lagu iibsado iPhone 6
Iibsashada iPhone 6 ama 6 Plus waa maalgashi dhaqaale oo adag oo aynaan iska indhatiri karin, halkan waxaan ku soo bandhigayaa xulashooyin ku habboon dhammaan dhaqaalaha.
Qorshayaasha Kaydinta ee ICloud: Kee La Doortaa?
Waxaan kaa caawinaynaa inaad doorato midka noqon kara qorshaha kaydinta ee ugu fiican iCloud iyadoo kuxiran sida aad u isticmaasho qalabkaaga.
SwipeSelection Pro iyo AltKeyboard 2 ayaa dhawaan imanaya App Store
AltKeyboard 2 iyo SwipeSelection Pro ayaa durbaba diyaar u ah inay garaacaan App Store
Top 25 macruufka 8 Features (I)
IOS 8 gacmaheena ayaan horeyba ugahadli karnaa 25 shaqooyinka ugufiican ee nidaamkan qalliinka
Soodeji xiriiriyeyaasha iOS 8 nooca ugu dambeeya
Haddii kale maya waad ka soo dagsankartaa iTunes iOS 8 nooca ugu dambeeya, maxaa yeelay adeegeyaasha Apple ayaa cufan, hoosta waxaan ku tusi doonaa xiriiriyeyaasha tooska ah ee soo dejinta ee IPSW
Sida loo demiyo soo dejinta otomaatiga ah ee Ipad-ka
Haddii aadan rabin barnaamijyada qalabkaaga, muusikada, iyo cusbooneysiinta inay si otomaatig ah u soo dejistaan, dami soo dejinta otomaatiga ah ee iPad-kaaga
Isku xirnaanta Bluetooth iyo Wifi, oo fure u ah Apple Watch
Apple Watch wuxuu leeyahay isku xirnaanta WiFi in kasta oo uusan si toos ah internetka uga gelin
Waxaad ku dhageysan kartaa muusikada Apple Watch-kaaga adigoon isticmaalin iPhone-ka
Apple Watch uma baahna iPhone si uu awood ugu yeesho inuu ku ciyaaro muusikada iyadoo la adeegsanayo sameecadaha dhegaha leh ee Bluetooth
Muxuu khabiir saacaddu ka qabaa Apple Watch
Khabiir ku xeel dheer saacadaha ayaa fikirkiisa ka dhiibanaya saacadda Apple Watch, isagoo u falanqeynaya sida saacad oo uusan aheyn wax farsamo ahaan ah
Waxyaabaha ugu muhiimsan ee ay tahay inaad ka ogaato Apple Watch
Kuwani waa 9ka arrimood ee ay tahay inaad ka ogaato aaladda cusub ee Apple, Apple Watch
Apple Watch, toddobo waxyaalood oo isaga ku saabsan oo aanad garan karin
Sirta iyo astaamaha Apple Watch ee aan lagu sheegin nuxurka bandhigga iyo in laga yaabo inaadan ka ogayn Apple Watch.
Faallooyinka ugu horreeya ee fiidiyowga ee iPhone 6 iyo Apple Watch
Fiidiyeyaasha leh falanqaynta koowaad iyo dib u eegista ee iPhone 6, iPhone 6 Plus iyo Apple Watch.
Kuwani waa fiidiyowyada xayaysiinta ee iPhone 6 iyo Apple Watch
Uruurinta fiidiyowyada cajiibka ah ee iPhone 6 iyo Apple Watch oo ay duubtay Apple si ay noo tusto awooda wax soo saarkooda cusub.
Saacadda Apple Watch maahan saacad biyo-diid ah
Saacadda Apple Watch laguma quusin karo biyaha waxayna leedahay xaddidaadyo kale sida madax-bannaanideeda iyo fursadaha khad la'aanta.
Dhamaan macluumaadka Apple Watch
Waxaan ku tuseynaa dhammaan macluumaadka la xiriira Apple iWatch oo muddo dheer la sugayay oo ugu dambeyn loogu yeeray Apple Watch
Ciyaarta yar «Vasebreaker» ayaa ku laabanaysa dhirta vs Zombies 2
Cusboonaysiinta cusub ee Dhirta iyo Zombies 2, minigame "Vasebreaker" ayaa lagu soo daray, si loogu raaxaysto xitaa in ka badan PvsZ2
Sida loo soo celiyo lambarkaaga sirta ah ee Apple ID
Baro sida loo soo cesho lambarkaaga Aqoonsiga Apple oo aad u sii wadato marin u helka App Store, iTunes, iCloud, iwm.
9 tilmaam iyo tabaha ku saabsan ciyaarta caanka ah: Candy Crush
Waxaan ku tusineynaa 9 talooyin iyo tabaha si aad uga gudubto dhammaan heerarka Candy Crush
Amniga ICloud ayaa khalkhal galay oo sawiro qarsoodi ah oo dadka caanka ah ayaa sir ah
iCloud waxay heshaa weerar hacker ah oo lagu maareeyo sawirro qaawan oo caan ah ama si gaar ahba. Mar labaad, amniga adeegga ilaa dood.
Codsiyada ugufiican ee laga helo Instagram-ka ipad-ka
Isticmaalayaasha IPad kuma raaxeysan karaan barnaamij la hagaajiyay oo ka socda shabakadda bulshada ee Instagram, laakiin waxaa jira codsiyo astaamahan u qaadaya iPad-ka.
Kairos, smartwatch-ka dhabta ah
Kairos smartwatch, saacadda ugu horreysa ee isku dhafan ee suuqa, waa isku dhafka ugu fiican ee u dhexeeya saacadda otomaatiga ah iyo smartwatch
Kaga bixi aagga buluugga ah iPhone-kaaga oo leh e-park
E-park ayaa kuu oggolaanaya inaad ka bixiso aagga buluugga ah taleefankaaga casriga ah, cusbooneysiiso tigidhada iyo xitaa inaad bixiso ganaaxyada aad ku hesho wax ka badan waqtiga loo oggol yahay
Apple waxay sii wadi doontaa ballaarinta Bariga Dhexe waxayna gaari doontaa Imaaraadka Carabta, magaalada Dubai waxay martigalin doontaa Apple Store ugu weyn adduunka.
Haddii aan dooneyno inaan ka tirtirno feylasha iyo xogta barnaamijyada ku jira qalabkeenna, oo qaadaya meel bannaan oo ku taal iCloud, waa inaan ka tirtirno iDevice-keena
Maxay u jiraan barnaamijyo lacag leh qaybta bilaashka ah?
Xaqiiqdii waxaad ogaatay inay jiraan barnaamijyo lacag ah oo laga bixiyo qaybta bilaashka ah ee App Store, waayo?
Waxaa loo heli karaa soo dejinta iTunes 11.3.1: kuwani waa warka
Maanta waxaan ogaanay cusbooneysi cusub oo iTunes 11.3.1 ah oo loo heli karo Mac iyo Windows kaas oo aan ku falanqeyneyno waxyaabaha cusub ee waaweyn ee lagu sii daayo.
Haddii iPad-kaaga Wi-Fi uusan shaqeyneyn, raac talaabooyinkan
Xaalado badan isku xirnaanta Wi-Fi ee ipadyadu si sax ah uma shaqeeyaan, raac talaabooyinkan si aad isugu daydo dib u soo celinta isku xirnaanta la yiri
Khiyaanada Facebook Messenger
Isbeddelka ka yimid Facebook ee Facebook Messenger wuxuu ku dhowaad ku lug leeyahay afduubkii qalabkeenna Mark Zuckerberg.
Sida loo xadido marinka App Store, iBooks Store, iyo iTunes
Mashruucan waxaan ku baran doonaa sida loo xakameeyo helitaanka dhammaan dukaamada macruufka ah sida App Store iyada oo loo marayo macruufka xakameynta waalidka
Waad ku mahadsan tahay nooca 1.1 ee Microsoft PowerPoint waxaan ku dhejin karnaa fiidiyowyada bandhigyada waxaanna u heli karnaa Muuqaalka Muuqaalka iyadoo lagu daro waxyaabo kale
Ciyaaraha difaaca ugu fiican ee macruufka
Waxaan ku tusineynaa shan ciyaarood oo ah Difaaca Difaaca ee aadan joojin karin isku dayga.
Codsiyada leh faa'iidooyinka ugu badan ee App Store waa ciyaaro
Qaarkood waxay ku guuleysteen inay noqdaan maalqabeenno runtii wata qalabka iPhone-ka iyo horumarkooda, laakiin in ka badan 80% kiisaska, oo leh ciyaaro.
CronicUnlocks ayaa ku dhawaaqday adeeg cusub oo ay na siineyso suurtagalnimada in meesha looga saaro qufulka firfircoonida iyadoo lagu beddelayo $ 149,99.
Disney waxay soo nooleysaa ciyaarta caanka ah ee Kubadda Cagta Facebook
Ciyaarta caanka ah ee Bola, ayaa mar labaad soo muuqatay laakiin markan kaliya codsi loogu talagalay macruufka.
GT Racing 2: Khibrada Gawaarida Dhabta ah waxaa lagu cusbooneysiiyay gawaari cusub
Mid ka mid ah gawaarida gawaarida loogu talagalay App Store, GT Racing 2: Khibradda Gawaarida Dhabta ah, ayaa lagu casriyeeyay astaamo cusub oo xiiso leh.
Apple wuxuu kordhiyaa mudada ugu badan ilaa 60 maalmood si qandaraas loogu siiyo AppleCare
Apple waxay kordhisay mudada qandaraaska AppleCare ee adeega damaanad qaadka la kordhiyay ilaa 60 maalmood.
Maxaa ku dhici doona iPod Touch?
Maxaa ku dhici doona iPod Touch? Apple ayaa si aamusnaan leh dib ugu habayn ku sameysay noocyadan todobaadkan iyadoo leh qaab aad u jaban, laakiin muxuu mustaqbalka ku hayaa ciyaaryahanka?
Dhirta iyo Zombies 2 waxaa lagu cusbooneysiiyay adduun cusub
PopCap ayaa hadda cusbooneysiisay ciyaarteeda calanka, Dhirta iyo Zombies 2, iyadoo ku dareysa adduun cusub: Dunida Madoow.
Tani waa waqtiga ugu fiican ee la iibsado saamiyada Apple
Tani waa waqtiga ugu fiican ee la iibsado saamiyada Apple iyada oo ay ugu wacan tahay xaqiiqda ah in Apple ay u kala qaybisay qiimaha saamiyadeeda 7 qaybood oo qiimaha aad uga jaban
Apple waxay rabtaa inay cadeyso iWatch oo ay sameyso FDA
Warbixinadii ugu dambeeyay waxay sheegaysaa in iWatch laga sugayo ogolaanshaha FDA, oo ah waaxda Waqooyiga Ameerika ee masuulka ka ah ilaalinta caafimaadka.
LEGO Marvel Super Heroes, uguna cusub Warner Bros ee iOS
Cinwaan cusub ayaa imanaya App Store: LEGO Marvel Super Heroes: Universe in Peril
Second-gen Apple TV wuxuu ka dhammaanayaa taageerada iOS 8
Apple waxay sii deysay softiweerka Apple TV 7 beta 1 softiweerka ka tagaya jiilka labaad ee Apple TV oo aan la taageerin, kaliya wuxuu taageeraa moodeelka hadda jira.
IOS 8 waxay noo ogolaaneysaa inaan wicitaano cod kooxeed ku sameysano FaceTime
Sida laga soo xigtay warbixinnadii ugu dambeeyay, macruufka 8 wuxuu noo oggolaan doonaa inaan wicitaanno kooxeed dhex marno dhowr isticmaale oo leh barnaamijka FaceTime ee asalka ah.
7 sababood oo ah inaadan rakibin macruufka 8 Beta
Laga soo bilaabo iPad News waxaan ku siineynaa toddobo sababood oo ah inaadan rakibin macruufka 8 beta.
Maxaa ku cusub Apple-ka cusub ee IOS 8 (I)
Laga soo bilaabo Actualidad iPad-ka waxaan ku tusaynaa dhamaan wararka Apple soo bandhigtay ee ku saabsan iOS 8 ee beddeli doona macruufka hadda jira ee 7 dayrta soo socota.
OS X Yosemite: nidaamka hawlgalka cusub ee Macs
Apple waxay soo bandhigtay nidaamkeeda cusub ee hawlgalka ee Mac ee WWDC: OS X Yosemite, oo ku dhow naqshada ugu yar ee macruufka 8
Raac WWDC 2014 adigoo soo bandhigaya macruufka 8 toos uga baxa barnaamijka iPad News
La soco Actualidad iPad soo bandhigida iOS 8, OS X 10.10 iyo dhamaan wararka WWDC 2014 oo si toos ah uga socda bartayada iyo shabakadaha bulshada.
Apple mar dambe ma oggola in la cusbooneysiiyo ama dib loo rakibo barnaamij la soo celiyey
Apple waxay bedeshay siyaasadii dalab la soo celiyay oo la soo celiyay, hadda dib looma cusbooneysiin karo ama lama soo dejin karo haddii aynaan mar labaad iibsan.
Adobe Photoshop Touch wuxuu helayaa noocyo cusub oo burush ah
Adobe waxay cusbooneysiisay barnaamijkeeda Adobe Photoshop Touch noocyo cusub oo burush ah iyo hal-abuurnimo kale oo aad muhiim u ah sida soo-kabashada otomaatiga ah
Autodesk waxay bilaabeysaa Dib-u-eegista FDX si ay u daawato faylasha 3D
Autodesk ayaa hada bilaabay codsi FDX Review ah oo loogu talagalay iOS iyo OS X, kaas oo aan ku daawan karno animations-ka 3D ee aan ku abuurnay meheradaha kale.
Hababka kala-soocidda: USB vs Wi-Fi vs Bluetooth
Laga bilaabo iPad 3, Apple wuxuu ogolaaday wadaagida internetka (tethering). Waa maxay habka ugu isticmaalka badan: abuuro shabakad Wi-Fi ah, isticmaal Bluetooth ama USB?
Apple waxay aqoonsan tahay dhibaatooyinka farriimaha qoraalka ah
Adam Pash ayaa ka warbixiyay in Apple ay aqoonsatay dhibaato: fariimaha qoraalka ah waxaa loo badalay iMessage si hadhow loogu gudbiyo ID Apple
Isticmaalayaal badan ayaa dhibaatooyin ka haysta cusbooneysiinta barnaamijyadooda
Cilad cusub ayaa ku degtay App Store. Markan, ma cusbooneysiin karno barnaamijyadeenna dhibaatada ka jirta Aqoonsigeenna Apple.
Dukaanka Apple wuxuu kujiraa kaalinta labaad ee iibka internetka kadib Amazon
Dukaanka Apple ee khadka tooska ah ee Apple ayaa gaadhay kaalinta labaad ee mugga iibka internet-ka, isagoo dhaafay Staples oo kaliya ka dambeeya Amazon
Xasiloonida, barnaamijka bilaashka ah ee usbuuca
Xasilooni darrida, mid ka mid ah aaladaha ugu wanaagsan ee lagu qaadan karo nooc kasta oo qoraal ah, wuxuu noqonayaa mid bilaash ah codsashada usbuuca ee App Store.
Qaar badan oo jiilka kowaad ah ee adeegsada Apple TV ma awoodaan inay galaan iTunes Store
Qaar badan oo ka mid ah jiilka koowaad ee isticmaala TV-ga Apple ayaa ka cawday in ay awoodi kari waayeen in ay galaan iTunes Store muddo ka badan saddex maalmood.
RollerCoaster Tycoon 4 ayaa hadda loo heli karaa macruufka
Atari ayaa hadda sii daayay RoolerCoaster Tycoon 4 oo loogu talagalay qalabka macruufka. Waxaan hadda ka abuuri karnaa jardiinadeena madadaalo ee aan ku jecel nahay iPad-kayga
Muusikada-qeexitaanka sare ee loo maro iTunes ayaa dhowaan soo socota
Apple waxaa laga yaabaa inay qorsheyneyso inay soo bandhigto faylal maqal ah oo 24-bit ah oo loo maro iTunes, taas oo kordhinaysa tayada muusikadaada.
Sideed u horumarin kartaa barnaamijka YouTube-ka ee loogu talagalay iPad-ka?
YouTube waa mid ka mid ah barnaamijyada ugu fiican ee lagu daawado fiidiyowyada qulqulaya, laakiin codsigeeda loogu talagalay macruufka ayaa xoogaa khatar ah, maxaa hagaajin kara?
Qoyska Guy wuxuu ku degaa App Store
Ugu dambeyntiina, iyo bilooyin badan oo aan sugeynay tan iyo markii lagu dhawaaqay, waxaan hadda ku raaxeysan karnaa ciyaarta Aabbaha ...
Ereyga wuxuush: ciyaarta cusub ee Rovio Stars, oo faahfaahsan
Haddii aad jeceshahay naqshadeynta cayaaraha Rovio Stars, waxaad nasiib u leedahay maadaama ay billaabeen cinwaan cusub oo loo yaqaan 'Word Monsters' oo ku saleysan raadinta ereyga
Dukaankii ugu horreeyay ee Apple ee Turkiga laga furo 5-ta Abriil magaalada Istanbul
Dukaan kale oo Apple ah oo adduunka oo dhan albaabadiisa u fura. Markan waxay noqon doontaa Istambuul, sidaas darteed waxay noqoneysaa bakhaarkii ugu horreeyay ee shirkaddu ku leedahay dalkan.
Ururka Daawadayaasha Switzerland ayaa diidaya inay la shaqeeyaan Apple iyo iWatch
Apple waxay isku dayday inay ku guuleysato inay ka dhacdo shaqaalaha shirkadda Hublot, iyo sidoo kale soo saarayaasha kale ee ku takhasusay qaybaha saacadaha raaxada ee saxda ah ee iWatch.
Fikradda ah kontoroolka fog ee la midka ah Wii remote loogu talagalay Apple TV
Warar weyn oo loogu talagalay Apple TV ayaa la filayaa soo bandhigga soo socda. Laakiin maanta waxaan la tagnay fikradda hagidda fog ee shaqada.
Motorola waxay soo bandhigeysaa smartwatch-keeda, Moto 360
Shirkadda Motorola ayaa soo bandhigtay Moto 360, oo ah smartwatch la tartami doonta shirkadda Apple ee iWatch
IPhone 6 waxaa ku jiri kara dareemayaal heerkul, cadaadis iyo qoyaan
IPhone 6 waxaa ku jiri lahaa taxaneyaal taxane ah oo lagu cabbirayo heerkulka, cadaadiska iyo qoyaanka deegaanka, sida uu sheegay falanqeeye Shiineys ah oo faallo ka bixiyay maanta
Toca Pet Doctor, Toca Boca cusub oo hada laga heli karo App Store
Toca Boca waxay cinwaankeeda cusub ka bilaabaysaa App Store: Toca Pet Doctor, waa ciyaar madadaalo leh oo caruurtu ku noqdaan dhakhaatiirta xoolaha.
Kalandarka Soo Bandhigida Alaabada Apple ee sanadka 2014
Sida ku xusan wararka xanta ah iyo xakamaynta falanqeeyayaasha, waxaan kuu daayey qiyaasaha goorta alaabooyinka cusub ee Apple ay arki doonaan iftiinka sannadkan.
Mustaqbalka Apple Store ee Puerta del Sol ee Madrid wuxuu daaha ka rogaa wajiga
Ugu dambeyntii si toos ah in loo furo Puerta del Sol Apple Store, ugu yaraan, taasi waa waxa aan rajeyneyno ka dib markaan aragnay dib-u-hagaajinta laba sano ka dib
Cilladaha 'iOS 7' ayaa kuu oggolaanaya inaad joojiso Raadi My iPhone iyada oo aan erey sir ah lahayn
Khalad aad u daran ayaa laga helay macruufka 7. qaladkan wuxuu noo ogolaanayaa inaan joojino ikhtiyaarka "Raadi iPhone-kayga" haddii aan ku qasbanaaneyno inaan qorno lambarka sirta ah
iPod: ganacsi muddo dheer hoos u dhacayay sida uu sheegayo Cook
Soo bandhigida xogta iibka sanadlaha ah ee Apple ayaa iska indhatirtay kuwa iPod-ka si sax ah maxaa yeelay ciyaaryahanka ayaa luminaya booskiisa.
Faahfaahinta Apple, hello
Xusuusta, waxay ku xasuusteen kuwii naqshadeeyay oo isbeddel ku sameeyay nooca Mac-mac-hadhka, waxayna salaan ka dhigteen lanyaryada
Maxaad ugu beddeleysaa iCloud siyaasadaha cusub ee Gmail kadib?
Ikhtiyaarka cusub ee ku jira Gmail wuxuu u oggolaanayaa qof walba inuu kugula soo xiriiro iimayl ka socda Google Plus. Qarsoodi la'aantaas waxay ku dareysaa dhibco xulashada iCloud.
GoodReader ayaa gabi ahaanba dib loo naqshadeeyay cusbooneysiintiisa iOS 7
Codsiga GoodReader wuxuu helayaa cusbooneysiintiisa weyn (oo la jaan qaadaya macruufka 7) oo leh in ka badan dersin shaqooyin cusub.
Seas0nPass ayaa laga heli karaa Jailbreak Apple TV 2 oo leh saxiix 5.3
Seas0nPass 2.4 hadda waa la heli karaa, qalab mas'uul ka ah Jailbreak jiilka labaad ee Apple TV oo leh saxeexa 5.3 (6.4.1).
#SorteoActiPad: 4 LoginBox xayeysiisyada xayeysiinta
Amniga iPad-ka ayaa muhiim ah oo LoginBox ayuu ku jiraa, furayaasha sirta ah iyo magacyada isticmaalaha shabakadaha ayaa amaan ah.
Jooji fiidiyaha tooska ah ee fiidiyowga ee Facebook-ga ku jira iPad-keena
Markii aan daawaneyno darbigeena Facebook, fiidiyowyadu waxay bilaabayaan inay si toos ah u ciyaaraan, iyagoo si aan loo baahnayn u kharash gareeya heerka xogteenna.
LEGO Star Wars: Saga Dhameystiran Oo Hadda Loo Heli Karo iPhone iyo iPad
Haddii aad taageere u tahay LEGO iyo Star Wars, ciyaarta LEGO Star Wars macruufka waa suurtagal kii aan in badan oo naga mid ahi sugaynay.
Dhamaan Apple, joornaalkeena ku saabsan iPhone, iPad iyo Mac ee Flipboard
Waxaan bilownay majallad cusub oo ku saabsan adduunka Apple, oo bilaash ah oo laga heli karo taleefannadaaga iphone-yada iyo ipad-yadaaga.
Sida loogu hadiyado barnaamijyada loo maro iTunes ama App Store
Maanta waxaan ku sharxi doonnaa sida loogu hibeeyo barnaamijyada iyada oo loo marayo iTunes ama si toos ah loo marayo App Store iyadoo la raacayo 9-kan tallaabo ee fudud.
Dukaammada Apple waxay u dhigmayaan sicirka dukaamada kale ee jirka
Apple Store wuxuu la mid yahay qiimaha tartanka. Waa siyaasad yar oo la yaqaan laakiin waxay noo dammaanad qaadi kartaa qiimo dhimis yar haddii aan ogaanno sida loo isticmaalo.
Paypal waxay bixisaa suurtagalnimada in lagu iibsado kaararka hadiyadaha iTunes
Paypal waxay soosaaraysaa dukaan hadiyad dijitaal ah oo u gaar ah lammaanaheeda kowaadna waa shirkadda Apple ee bixisa suuqgeynta kaararka hadiyadaha iTunes.
iTunes Match VS Google Play Music (I): Soo rar muusigaaga
Waxaan falanqeyneynaa iTunes Match iyo Google Play Music, oo ah laba adeeg oo aad isugu eg, oo aan isbarbar dhigno mid walba waxa uu na siiyo.
myMail codsi cusub oo aad u xiiso badan
myMail, codsi e-mayl oo bilaash ah ayaa loo heli karaa labada ipad iyo iPhone waxayna taageertaa Gmail, Yahoo, iCloud, Outlook, Hotmail, xisaabaadka IMAP / POP3
Apple waxay hoos u dhigeysaa shuruudaha siinta iPhone-kaaga hore isla markaana qiimo dhimis ugu hesho iPhone-kaaga cusub markay qoyan tahay
Laga bilaabo toddobaadkan Apple waxay wax ka bedeshay shuruudaha si ay u awoodaan inay keenaan aaladdaadii hore si ay u helaan qiimo dhimis si ay kuu iibsadaan ...
Dukaanka Apple ee Granada?
Sida laga soo xigtay macluumaadka laga helay blog-ka Emilcar, Granada, gobolka Andalusiya wuxuu lahaan karaa bakhaar ku yaal Apple, oo loogu yeero Apple ...
Dukaamada Apple waxay u isticmaali doonaan iBeacon inay ku horumariyaan adeegga iyo iibka
IBeacon waa mid ka mid ah riwaayadaha waaweyn ee nidaamka iOS7 wuxuuna saameyn weyn ku yeelan karaa ganacsiga, tan iyo ...
10 Barnaamij oo loogu talagalay iPad Air iyo iPad Mini Retina oo ay soo bandhigeen Apple (iyo III)
Waxaan ku sii wadaynaa 10 codsiyo kale oo loogu talagalay iPad Air iyo iPad Mini Retina, oo ay Apple u xushay aaladahaan.
Ma rabtaa inaad ku qurxiso iPad-kaaga sawir gacmeedyada Halloween?
Maalintii ugu madoobayd ee sannadka ayaa timid: Halloween, waana taas sababta aan kuu tusineyno 3-da codsi ee aad ku xulanayso sawir-gacmeedkaaga naxdinta leh.
Apple TV waxaa loo cusbooneysiiyay nooca 6.0.1
Apple TV waxay heshay casriyeyn softiweer ah oo loogu talagalay nooca 6.0.1, kaasoo keenaya waxqabadka guud iyo xasilloonida.